Date My Pet » Nokuti Rudo ane Pet
Ini ndiri Calculated chaizvo munhu. Zvose Ini kuita aronga kwazvo, nokuti zvose ndinoita zviri zvine urongwa chaizvo. Pavanosarudza kuti ndaida chipfuwo, Nyatsofunga Ndakafunga pamusoro nguva kuzvipira, mari zvemari pamwe ukama refu kuti taizova pamwe chete. Chii handina ngaaverenge yaiva nzira iyo katsi yangu, Beau dai ndiponesei.
In angu makore makumi maviri namashanu, Ini chagadzirisika upenyu zvakaoma. Mukati maro zvose, mazuva angu zvinoita chichiwedzera zvikuru zvinotonzi achiziva kuti katsi wangu kumirira ini pamba. kusurukirwa wangu kudzoreka sezvo Beau inopa shamwari Negima anogara akagadzirira kupa nyaradzo pasina kutongwa. Mazuva vane awa-refu dzinovaraidza apo cuddling uye kupukutwa misodzi inopa mamwe zororo uye kutandara kupfuura zvandaifunga zvaizova zvichikwanisika. Mazuva vane awa-refu kutamba muzvirongwa yakazadzwa nokuseka inopa mamwe mufaro kupfuura zvandaifunga zvaizova zvichikwanisika. Rudo inovaraidza kunogona zvechokwadi nekuporesa.
Chimwe chinoita ndaida chipfuwo chaiva kubatsira kwangu kuramba maitiro rwaamai. Ndaiziva kuti rudo rwangu katsi zvaizobatsira kuchinja ini kupinda mai zvandinoda uye kuva nevana vangu ramangwana. Beau kuvimba andiratidza basa uye chibayiro kunodiwa kuti zvechokwadi kusimudza uye kubatsira neMuridzi mumwe mupenyu. In dzokera, isiyo rudo rwake akandiita rudo zvakadzama. It andiratidza rudo kuti handina kutongokuzivai zvaibvira. Rudo inovaraidza kunogona zvechokwadi kukudzidzisa zvinoreva rudo.
My akaverenga kuedza kuwana dzinovaraidza yangu akanditungamirira pamusoro yemaawa matatu motokari bhiza mhiri mamiriro Michigan. Paakapinda kununurwa, mumwe kittens vakauya kodzero pamusoro kwandiri, vakaisa pasi pamakumbo angu, uye havana kusiya. Ndakanga vaizviti. Kubvira pazuva iroro zvichienda mberi, kwangu katsi uye Ndarota Rwunoshamisa. Beau ane ushamwari chaizvo, anenge imbwa-kufanana asi ari kutaura chaizvo nezvomunhu. Kusvitsa dzakawanda neshamwari dzangu uye suitors kwemakore, Beau vaudzewo kugona kwake zvakare uye zvakare kuti zvakarurama unotonga munhu. ini, saizvozvo, zvino vanoenda kwaari kuti zvijeke. Rudo inovaraidza kunogona kuratidza unhu uye intension nevamwe zvechokwadi.
Vachibva wakaputsika musha uye rine zvishoma haana ukama nababa vangu akanditungamira kuti ndive up-kure. Nokuda kwaizvozvi, pakusarudza dzinovaraidza wangu, Ndaiziva kuti aifanira kuva munhurume. The hanya hunhu uye rudo kuti Ndakauyisa Beau akaita zvakatoita naye kuva katsi rudo kwazvo. kuvimba ake pamusoro pangu andiratidza sei pangozi chaizvo ukama ichi. Rudo kuti Beau andiratidza zvinondipa tariro, nokuti iye akafuridzira ini kuvhura uye zvinova nyore. katsi wangu andiratidza kuti rudo mumwe munhu nguva dzose kwakakodzera ngozi. Rudo inovaraidza kunogona zvechokwadi zvinopa tariro.